अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै मात्र चीनबाट आउने हजारौं सामग्रीलाई महँगो बनाएका छन् । यसमा बेसबल क्याप, मोटरसाइकल र हातेझोला पनि समावेश छन् । २५ प्रतिशतको नयाँ भन्सार शुल्क वृद्धिबाट प्रभावित हुने धेरैजसो आयातमा औद्योगिक र अद्र्धऔद्योगिक वस्तुहरू रहेका छन् । तर, सूचीमा परेका झन्डै एकतिहाइ वस्तुहरू उपभोक्ता सामग्री रहेका छन् । यसमा लगेज, ब्याकप्याक्स, बेसबल ग्लोभ्स, बासका फर्निचर लगायतका पनि परेका छन् । यसले सेलबोट र मोटरबोटलगायतका सामग्रीलाई पनि असर गर्नेछ ।
अस्ताउँदै झापाभित्रको ‘झापा’
पुरानो पुस्तालाई झापा भन्ने अलग्गै ठाउँ भएको थाहा भए पनि नयाँ पुस्ता यो सम्बन्धमा बेखबर छ । यही स्थानको नामबाट जिल्लाको नाम पनि झापा रहन गएको हो ।
जारी बोनस सेयरले अनावश्यक चुक्ता पुँजीको बोझ र सेयरधनीको कुल सम्पत्तिको ह्रासले कम्पनी प्रताडित नहोस् भन्नेमा चनाखो हुनैपर्छ । बोनस अर्थात् सेयरधनीले प्रत्यक्ष नगद भुक्तानी नगरी लाभांश (नगद) का रूपमा पाउनुपर्ने रकमबाट भुक्तानी हुने गरी कम्पनीबाट सेयर लाभांशको रूपमा प्राप्त गर्ने थप सेयर । सामान्यतयाः कम्पनीले व्यवसायबाट प्राप्त नाफाबाट कर तथा कोषहरू छुट्ट्याएर वितरणयोग्य मुनाफा सेयरधनीलाई लगानीको आधारमा समान दरमा लाभांश (नगद वा सेयर)का रूपमा वितरण गर्छन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र सुशासन
अंग्रेजी मे महिनाको १७ तारिखका दिन विश्व दूरसञ्चार दिवस मनाउने कार्य सन् १९६९ देखि सुरु गरिएको हो । दूरसञ्चार भन्नाले एक ठाउँमा रहेको जानकारी, सूचना, सन्देशलाई अर्को टाढाको ठाउँसम्म पु-याउने कार्य हो । प्राचीन कालमा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा कटुवाल घोकाएर गाउँका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा भेला गराई विभिन्न सूचना र सन्देशहरू धेरै मानिसहरू सम्म पुर्याईन्थ्यो ।
किन आउँदैन बाह्य लगानी
गएको साता काठमाडौंको एक पा“चतारे होटलमा एक जना युवास“ग साक्षात्कार गर्ने मौका मिल्यो । उमेरले भर्खर ४० को हाराहारीका उनी विश्वका अग्र पाँच विकसित देशमध्येको कुनै एक देशमा लगभग दुई दशकदेखि जमेर बसेका रहेछन् । मुख्य पेसा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक भई काम गर्दै आएका उनी व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि जमेका व्यक्तित्व रहेछन् । दुई देशबीचको व्यावसायिक परिषद्स“ग समेत जोडिएका उनीस“गको कुराकानीबाट ममा निकै खुलदुली जागा भयो ।
विकास–निर्माणको पद्धति बदल्नु जरुरी छ
बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तार गर्न भनेर खनेको दुई तीन वर्ष बित्दा पनि उस्तै हिलाम्य, धुलाम्य रहँदा स्थानीयले कहिले धान रोपेर आक्रोश देखाए, कहिले यातायात बन्द गरेर । हुन पनि त्यहीँ खनेका खाडलमा परेर, बस पल्टिएर यात्रु घाइते पनि बने । त्यही तल जोरपाटीदेखि थलीको बाटो पिच गरेको दुई हप्ता नहुँदै उप्किँदा फेरि यो बर्खा बिजोग हुने देखिन्छ । देशमा कतै पुल बन्दाबन्दै भास्सिएका छन् त कतै दशकौंदेखि पुलको नाममा केही खम्बा मात्र उठेका छन् । विकास–निर्माणका यस्ता बिजोग देशभरि देखिए पनि विकास–निर्माण मन्त्री आफ्नो प्रगतिको पुल बाँधेर मिडियाबाजीमा रमाएका छन्, उनको पीठो राम्रै बिकेको छ । तर, सांसद विकास कोषको पैसाले जथाभावी डोजर लगाइएका धुलैटो बाटाहरू र रूख–बिरुवा उजाडिदै भूक्षय र पहिरो जाने बनेका डाँडापाखाबाहेक जनताले देख्ने दिगो निर्माणको स्थितिमा खासै सुधार प्रायः देखिन्न । देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् । यस्ता निर्माणले पुँजीगत खर्च त केही गरेको देखाउन सरकारलाई सजिलो पार्छ, तर अधिकांश यस्ता खर्च स्तरहीन र अनुपयोगी भइरहँदा पुन बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले एउटै काममा थप खर्च र उपभोक्तालाई थप दुःख दिने गरेको छ ।
विकास प्रक्रियामा घस्रने कि उफ्रने ?
नेकपा डबलको सरकारले यही जेठ १५ गते आफ्नो दोस्रो बजेट संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्दैछ । सरकारका ‘टेक्नोत्र्mयाट अर्थमन्त्री’ले संसद्समक्ष पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले न्यायिक वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सुरक्षाको उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेसहित मूलतः ९ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
व्यापारघाटा कहिलेसम्म ?
चालू आवको विगत नौ महिनामा मुलुकको व्यापारघाटा २५ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो भनाइअनुसार हाम्रो व्यापारघाटा बढेर करिब रु. १० खर्ब पुगेको छ । उद्योग, उत्पादन र सेवा व्यापार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो ।
तेह्रथुमको आठराईमा गाउँघरमा भेटिने हरेक व्यक्तिले तपाईंसँग परिचित मुस्कान दिनेछन् । सोध्नेछन्, “हजुर कहाँसम्म ? केका लागि आउनुभो ?” त्यतिमात्र होइन, तपाईंलाई आफ्नै घरमा निम्त्याउनेछन् । चियापानी टक्र्याउनेछन् । दही, मोही र रैथाने खानेकुराले स्वागत गर्नेछन् । बारीमा सुन्तला फलेको छ वा अम्बा, मकै पाकेको छ वा काँक्रा, तपाईंलाई चखाउँछन् । आफ्नो घरमा आइदिएकोमा, आफ्नो चुलोमा पाकेको खानेकुरा खाइदिएकोमा कृतज्ञसमेत हुन्छन् । अहो ! यस्तो हार्दिकता अरू कहाँ पाइन्छ ? हाम्रा गाउँघरको भित्री सौन्दर्य हुन् यी ।